October 30, 2017 – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Maxay Yihiin Qodobada Looga Hadlayo Shirka Maamul-goboleedyada Iyo DFS?
Muqdisho(FMN)—Shirkii wada tashiga ahaay ee udhaxeeyay Dawlada Federaalka Soomaaliya iyo Maamulada xubnaha ka ah ayaa si rasmi ah Wajigiisii labaad uga socdaa Magaalada Muqdisho.Iyada oo uu shir-guddoominayo Madaxweyne; Farmaajo,ayna goob joog yihiin Dhamaanba hoggaamiyayaasha Maamul-goboleedyada […]
Jig-jiga(FMN)—Waxaa maanta si rasmi ah usoo xidhmay shirweynihii wada tashiga ee Shacabka iyo Xukummada DDSI uga socday xarunta shirarka ee Madaxtooyada DDSI ee magaalada Jig-jiga oo ay shir guddoominayeen Madaxweyne;Cabdi Maxamuud Cumar iyo Af-hayeenka Baarlamaanka […]
Muqdisho (FMN—) Maamulka Gobolka Banaadir ayaa soo saaray Wareegto uu ku mamnuucayo in Booyadaha aysan magaalada gudaheeda ku socon karin 7-da subaxnimo ilaa iyo Sideeda Fiidnimo iyo in Gaadiid xamuulka qaada aysan rari karin tan ka […]
Xuska sanadka-guurada 94aad Ee Xornimada Dalka turkiga Oo Xamar lagu Qabtay.
Muqdisho(FMN)—Munaasabad lagu Xusayo sanad guurada 94aad ee kasoo wareegtay markii uu xornimadda qaatay Dalka Turkiga ayaa ka dhacday gudaha Safaaradda dalkaasi ku leeyahay Magaalada Muqdisho. Munaasadda maanta waxaa ka qeyb galay, Ra’iisul Wasaarah XFS Mudane;Xassan […]